ဖိနှိပ်မှုတွေ များပြားတဲ့အတွက် တရုတ်စက်ရုံလုပ်သားတွေ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၂) မှာရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် (Global Electric) ဂလိုဘယ် အီလက်ထရစ် စက်ရုံက အလုပ်သမား ၈ဝ ကျော်ဟာ စက်ရုံဖက်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေအပေါ် ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေရပ်စဲဖို့ ဒီကနေ့ အလုပ်မဆင်းကြပဲ စက်ရုံရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်(၂)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင် Global Electric စက်ရုံက အလုပ်သမားတွေဟာ စက်ရုံရဲ့ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုတွေကိုလျော့ချပေးဖို့ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က ဆန္ဒပြနေကြစဉ်
Photo: RFA/Nay Thwe
စက်ရုံရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ များပြားလာတဲ့အတွက် အခုလို စက်ရုံရှေ့မှာထိုင်ပြီး ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆန္ဒပြအလုပ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မမြမြဝေ က RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဘာကြောင့် ဆန္ဒပြရတာလဲဆိုတော့ သူတို့တွေက သမီးတို့ဝင်တုန်းကတော့ Pressure တွေ သိပ်မပေးဘူးပေါ့နော်၊ အခုတော့ ခြေထောက်ချိတ်မထိုင်ရဘူး၊ စကားလည်းမပြောရဘူး၊ သူတို့တွေက သမီးတို့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကို အဆမတန်တောင်းပြီးတော့ သူတို့လိုချင်တာတွေမရရင် သမီးတို့တွေ လက်မှတ်ထိုးရတယ်၊ လက်မှတ်ထိုးတာ ၃ ကြိမ်ပြည့်ပြီဆိုရင် အလုပ်ကနေထွက်ရတယ်၊ အဲဒီစာချုပ်ကလည်း သမီးတို့ပထမ အလုပ်စဝင်ဝင်ခြင်းစာချုပ်မှာ အဲဒါတွေမပါဘူး၊ အခုအဲဒါတွေပါပြီးတော့ သူတို့တွေက အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ပြီး ဖိအားတွေပေးတဲ့အတွက် အဲဒါတွေကို လျော့ပေးဖို့ဆန္ဒပြတာပါ”
သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေထဲမှာ လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ မန်နေဂျာနေရာမှာ မြန်မာလူမျိုး အစားထိုး ခန့်အပ်ပေးဖို့်၊ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ဖြေလျော့ပေးဖို့၊ ဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာတွေ လျော့ချပေးဖို့ စတဲ့ အချက်တွေကို အဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ Global Electric စက်ရုံဟာ တီဗွီ၊ ရေခဲသေတ္တာတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံး ပြုတဲ့ လျှပ်စစ်ကွိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အခြားအပိုပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပြီး စက်ရုံမှာ အလုပ်သမားဦးရေ ၂၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုကာကိုလာစက်ရုံ အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
Feb 04, 2013 07:45 AM
ုM Y H
2012- 12 16 လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းမှာရေးဆွဲထားတဲ့ အချက်တွေမှာ မတရားခေါင်းပုံဖြတ်မှု ဖိနှိပ်မှုတွေကို စနစ်တကျ အထူးစီမံချက်ချ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ရေးသွင်းဖေါ်ပြထားပါတယ် ။ 'သို့သော်လည်း အခု ၂၀၁၃ ရောက်လာပြီ မလုပ်သေးဘူးဆိုတာ ဘယ်သူကြောင့်လဲ မသိတော့ပါဘူး
မြန်မာနိုင်ငံသားအလုပ်သမား နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားအလုပ်သမား ခွဲခြားဆက်ဆံသော၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများမတရားဖိနှိပ်သော တရုတ်လုပ်ငန်းများ။ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တရုတ်များကို၊ လုံးဝမယုံရပါ။
Feb 02, 2013 04:28 AM
I think it is part of anti-china movement.
Why shrimp producer in Myanmar could not compete in the world market?
Feb 01, 2013 11:51 PM